हेमजा, २० असोज। माछापुच्छे्र-८, खोरामुखस्थित शहीद हरिप्रसाद आधारभूत विद्यालयमा भएको शैक्षिक एवं धार्मिक महोत्सव १ करोड ६ लाख ४३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ दान रकम संकलन गर्दै शनिवार सम्पन्न भएको छ । शनिवार विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक कमला लम्साल पौडेलले २५ हजार ५ सय ५५, धरानका लक्ष्मी लिम्बुले २० हजार, अष्टे्रलियास्थित रिच फर नेपालले १ लाख, खोरामुखका रुद्रनाथ ढुंगानाले ३१ हजार… पुरा पढौ
पोखरा, २० असोज। पोखरा महानगरपालिका वडा १३, वीपीमार्गमा मस्तिष्क पक्षघात भएकाहरुका लागि दिवा सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याइएको छ। मस्तिष्क पक्षघात संरक्षक समूहले मस्तिष्क पक्षघातसम्बन्धी समस्या भएकाहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र संचालनमा ल्याएको हो।केन्द्रबाट नौ जनाले सेवा लिइरहेका छन्। १५ जनासम्मलाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मस्तिष्क पक्षघात दिवस अवसरमा पोखरा महानगरपालिका वडा १३ का अध्यक्ष… पुरा पढौ
पोखरा, १८ असोज। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले निर्धक्क भएर चार्डवर्प मनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। चार्डपर्व लक्षित गरी १८ प्रकारका सुरक्षा अपनाइएको भन्दै निर्धक्क भएर चार्डवर्प मनाउन प्रहरीले आग्रह गरेको हो। ‘विगतको अनुभवबाट सिक्दै सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौ,’ पोखरामा विहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले भने, ‘तपाईहरु निर्धक्क भएर चार्डपर्व मनाउनुहोस्।’ सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग… पुरा पढौ
राईजिङ स्टार युथ क्लबको रक्तदा
लेखनाथ, १८ असोज। पोखरा २७, रिठेपानीस्थित राईजिङ स्टार युथ क्लबले विहीवार आयोजना गरेको १२ औं खुला रक्तदानमा ७९ युनिट रगत संकलन भएको छ। पोखरा वडा २७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले पहिलो रक्तदाता हरिबहादुर जिसीलाई ब्लडब्याग हस्तान्तरण गरी कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा वडाध्यक्ष गुरुङले प्रत्येक ३/३ महिना अवधिमा रक्तदान गर्दा स्वास्थ्य राम्रो हुने र त्यही खेर जाने रगत बिरामीका लागि… पुरा पढौ
लेखनाथ, १७ असोज। नेपालीलाई अति माया मान्ने भारतीय ले. जनरल अशोक के. मेहताले आफ्ना सहपाठी भूपू सैनिकमाझ बुधबार आफ्नो ८० औं जन्मदिन पोखरामा मनाएका छन् । पोखरा ३२, लामेहालस्थित बुद्धिमान गुरुङको घरमा भारतीय भूपू सैनिकद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मेहताको जन्मदिन कार्यक्रम भएको हो । उमेरले बुढ्यौली लागे फूर्तिला देखिने मेहताले आफ्नी धर्मपत्नी अदितीको आग्रहमा यहाँ आएर जन्मोत्सव मनाएको बताए। पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा… पुरा पढौ
पोखरा, १७ असोज। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.ले नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई १० दिने अभिमुखीकरण तथा बैंकिङ तालिम दिएको छ। गत असोज ७ देखि १६ गतेसम्म चलेको तालिममा बैंक सम्बन्धित काम तथा नीति-नियम तथा सामाजीकरणबारे जानकारी दिइएको थियो। तालिममा नवनियुक्त ७६ जना कर्मचारी सहभागी भएका थिए। तालिम समापनमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठले तालिमले कर्मचारीहरुको कार्यकुशलता बढ्ने र कर्मचारीले यस्ता तालिमबाट… पुरा पढौ
पोखरा, १७ असोज। सिर्द्धार्थ क्लबले पोखरा सिर्द्धार्थ हेल्थ केयर प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा मुटु रोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम गरेको छ। बगालेटोल टोल सुधार समितिका अध्यक्ष हिराकाजी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा पोखरामा भएको कार्यक्रममा ८० जनाले निःशुल्क मुटुरोग तथा मधुमेह परीक्षण सेवा लिए। प्रमुख अतिथि हिराकाजी श्रेष्ठले सिर्द्धार्थ क्लबले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने शिलशिलामा विश्व मुटु दिवस अवसरमा संस्थाका सदस्यका साथै… पुरा पढौ
पोखरा, १६ असोज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सातादिने लामो चीन भ्रमणपछि पोखरा फर्किएका छन् । चीनको हाईनान प्रान्तका गभर्नरको औपचारिक निम्तो मान्न मुख्यमन्त्रीको टोली असोज ९ गते त्यसतर्फ गएको थियो । सोमबार नेपाल फर्किएका मुख्यमन्त्री मंगलबार पोखरा आइपुगेका हुन् । पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गुरुङले चीन भ्रमणबाट कुनै पनि आर्थिक सहायता नल्याएको बताएका छन् । ‘विदेश गएपछि कति पैसा ल्यायो भनेर सोध्छन् ।… पुरा पढौ